बालेन साहलाई मतगणनास्थलमाभित्र छिर्नै दिइएन यस्तो रैछ कारण! |
बालेन साहलाई मतगणनास्थलमाभित्र छिर्नै दिइएन यस्तो रैछ कारण!
May 21, 2022 adminLeaveaComment on बालेन साहलाई मतगणनास्थलमाभित्र छिर्नै दिइएन यस्तो रैछ कारण!
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० बाट स्वतन्त्ररुपमा वडाअध्यक्ष बनेका नरसिंह व्यन्जनकारको गणना प्रतिनिधि बस्न पुगेका काठमाडौं मेयरका उमेदवार बालेन साहलाई अर्को नगरको व्यक्ति प्रतिनिधि बन्न नपाइने भनेपछि फर्किएका छन् । उनी केहीबेरअघि ललितपुर पुगेका थिए ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
सेवाकालीन प्रशिक्षण भवन जावलाखेल पुगेका बालेनलाई प्रतिनिधि बस्न सोही नगरको व्यक्ति चाहिने भनेपछि फिर्ता भएका हुन् । उनी प्रतिनिधि बस्नका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट परिचयपत्र बनाएर पुगेका थिए । व्यञ्जनकार पुतली चुनाव चिह्न लिएर प्रतिष्पर्धामा छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागलुङ नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका वसन्तकुमार श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । श्रेष्ठले निर्वतमान नगरप्रमुख जनकराज पौडेललाई पाँच हजार ८२१ मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेका हुन् ।
अन्तिम मत परिणामअनुसार श्रेष्ठले १४ हजार ६७८ मत पाएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका जनकराज पौडेलले आठ हजार ८२१ मत पाए । गत स्थानीय निर्वाचनमा श्रेष्ठ पौडेलसँग दुई हजार ३०० मतान्तरले पराजित भएका थिए । दोस्रोपटकको आमने–सामनेमा श्रेष्ठले बाजी मारे ।
उपप्रमुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राजु खड्का १२ हजार ४२७ मत ल्याएर विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राप्रपाका सञ्जय खड्काले आठ हजार ६४ मत पाए । बागलुङ नगरका १४ वटा वडामध्ये ११ वटामा गठबन्धनको तर्फबाट विजयी भए ।
वडा नंं १, ३, ८, ९, ११, १३ र १४ वडा कांग्रेसले, वडा नंं २ र १० नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले, वडा नंं ४ माओवादी केन्द्रले र वडा नंं १२ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भए । वडा नंं ५, ६ र ७ भने एमाले निर्वाचित भएको छ ।
बलात्कार आरोप लागेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डे पक्राउ।यस्तो भएको रहेछ?
नेपालमा बज्यो खतराको घन्टी,सारा नेपालीलाइ थाहा हुनै पर्ने
Breaking News:होटलका कोठामा मतपत्र (पुरा हेर्नुहोस)